Tube yeYouTube inowanikwa mahara kwenguva yakati rebei. | IPhone nhau
Tube yeYouTube inowanikwa mahara kwenguva yakati rebei.
Chishandiso cheGoogle cheYouTube chakavandudza zvakanyanya nekufamba kwenguva uye tinogona kutaura kuti ndicho chikumbiro chakanakisa chatinogona kushandisa kunakidzwa nemavhidhiyo atinoda. Asi kunyangwe zvakadaro, mu App Store tinogona kuwana nhamba hombe yekushandisa iyo inotibvumidza kunakidzwa nemavhidhiyo edu aunofarira achiwedzera mabasa ayo YouTube haasati achiwedzera natively, kana tisingafunge nezve kurodha pasi mavhidhiyo, izvo zvinofungidzirwa kuti hapana chishandiso chinogona kuita, zviri pamutemo. Tube yeYouTube inotemerwa pa0,99 euros muApp Store, asi kwenguva yakati wandei tinogona kuitora mahara.
Tube yeYouTube inotipa chimiro chakasiyana zvachose pane icho chinopihwa neyekuzvarwa application, interface inotibvumira kutsvaga mamwe mavhidhiyo uye zvinyorwa zvekutamba. apo isu tiri kutamba mavhidhiyo mune yakazara skrini. Uye zvakare, nekuda kwekutonga kwekufambisa, tinogona kukurumidza kuwana chero basa rekushandisa tisina kurasika munzira, sezvazvinowanzoitika neyekutanga.
Chishandiso ichi chinotibvumidza kupinda neakaundi yedu yeYouTube kuti tikwanise kutamba runyorwa rwedu rwatinofarira, nzira dzatinonyorera ... inotibvumidza kunyorera kuzviteshi zvitsva, wedzera mavhidhiyo kune avanofarira kana kune evhidhiyo runyorwa kutarisa gare gare. Ruzivo nezve huwandu hwemaonero uye maonero akagadzirwa nevhidhiyo munharaunda iripowo.
Sekuona kwedu, ichi chishandiso chinotipa isu zvakafanana mabasa akafanana neanozvarwa application, asi neakasiyana zvachose interface kubva kune yakajairwa imwe. Kana iwe wakaneta nazvo, ikozvino kuti chishandiso ichi chiripo mahara iwo mukana wakanaka wekuyedza.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Apple zvigadzirwa » App store » Tube yeYouTube inowanikwa mahara kwenguva yakati rebei.
Ivo vanoba makumi maviri nemana iPhone muApple Chitoro cheSol vachiruma tambo
Iyo iPhone 8 inodzokera kune isina simbi uye girazi